Boqorka Spain Oo Fariin Muhiim Ah U Leh Wufuudda UNWTO, Spain iyo Dalxiiska
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Dowladda » Boqorka Spain Oo Fariin Muhiim Ah U Leh Wufuudda UNWTO, Spain iyo Dalxiiska
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • News • Dadka • Waajib ah • Wararka Spain • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Boqorka Isbaanishka wuxuu u muujiyaa taageerada xooggan ee UNWTO urur ahaan
Dalxiiska waa Ganacsiga Royal ee Spain.
Golaha Guud ee UNWTO ee soo socda ayaa laga yaabaa inuu noqdo mid horumar u ah warshadaha dhibaatada ku jira - Dalxiiska Adduunka.
Tan waxaa aqoonsaday Spain, oo ah dalka martigeliyay Ururka Dalxiiska Adduunka (UNWTO).
Ma jiro cid kale oo aan ka ahayn Boqorka, Felipe VI, Boqorka Spain, ayaa aqoonsan muhiimadda dalxiiska u leeyahay dalkiisa iyo adduunka.
Waxa kale oo uu og yahay sida ay muhiimka u tahay in waddan martigelinaya oo ka tirsan hay'adda Qaramada Midoobay uu ilaaliyo mawqif dhexdhexaad ah. Boqorka, martigelinta casho ee wufuudda UNWTO waxay sidoo kale u dirtaa fariin ah in habka codeynta ee qarsoodiga ah oo sugan lagu dammaanad qaadi karo Spain.
Spain dhawaan bilaabay qaabaynta mustaqbalka dalxiiska ee FII ee Riyadh, Saudi Arabia.
A ugu horeysay abid Dalal badan, Isbahaysiga Dalxiiska ee daneeyayaasha badan waxa uu ahaa xiddiga cusub ee COP26 ee Glasgow, markii Spain ay la midowday 9 dal oo kale si ay u noqdaan shuraako isbahaysigan.
Boqortooyada Isbaanishka, ama Boqortooyada Isbaanishka, oo dastuuriyan loogu yeero The Crown, waa hay'ad dastuuri ah iyo xafiiska ugu sarreeya Spain. Boqortooyadu waxay ka kooban tahay boqorka xukunka haya, qoyskiisa ama keeda, iyo ururka qoyska boqortooyada oo taageera oo u fududeeya boqorka gudashada waajibaadkiisa iyo xuquuqdiisa.
Sida qof ku jira booskiisa iyo dhererkiisa, Boqorka Spain wuxuu calaamad u noqon karaa fariin muhiim ah oo taageeraya warshad (dalxiiska), iyo machad (UNWTO), iyada oo aan u muuqan faragelin, taageero, ama diidmo arrimaha sida warqadda sirta ah ee xaqiijinta Xoghayaha Guud.
Sidaa darteed, in uu marti-sharafku casho-sharafta u sameeyo wufuudda ka soo qayb-galaysa shirweynaha guud ee hay’adda UNWTO ee soo socda ee ka kala imanaya daafaha dunida, waxa ay astaan ​​u tahay farriintiisa aamusnaanta ah ee dhexdhexaadnimada ah, waxaana loo arki karaa in uu taageero weyn u yahay guud ahaan dalxiiska adduunka.
The Shabakada Dalxiiska Adduunka ayaa garwaaqsaday muhiimadda ay leedahay tallaabadan, wuxuuna maanta soo saaray bayaankan soo socda.
Jawaabta WTN ee Taageerada uu u fidiyay Boqorka, Boqorka Felipe VI, Boqorka Spain, ee Dalxiiska Caalamiga ah
Honolulu, Hawaii, USA – Shabakadda Dalxiiska Adduunka waxa ay rabta in ay u muujiso mahadnaq weyn oo ay u hayso Boqorka Isbayn Boqorka Felipe VI, taageeradiisa dalxiiska.
Dr. Peter Tarlow, Madaxweynaha WTN, iyo Dr. Taleb Rifai, WTN Patron iyo Xoghayihii hore ee UNWTO, waxa uu xusay in Boqortooyadu uu ka shaqeeyay sidii loo taageeri lahaa guud ahaan warshadaha dalxiiska, isla markaana sida ay tahay qofka maqaamkiisa ah, uu ka fogaanayo in uu shakhsi ahaan u taageero.
King Felipe VI wuxuu u shaqeeyay si hagar la'aan ah si uu u keeno dib u soo noolaynta warshadaha dalxiiska.
WTN waxay salaamaysaa Boqor Felipe VI waxayna ka mahadcelinaysaa wax kasta oo uu boqorku u qabtay warshadaha dalxiiska ee aduunka.
Shabakadda Dalxiiska Adduunka (WTN) waa codka daahsoon ee ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee socdaalka iyo dalxiiska ee adduunka oo dhan. Anagoo midayna dadaalkeena, WTN waxay safka hore ka keentaa baahiyaha iyo rabitaanka ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe iyo daneeyayaasha. WTN kaliya uma doodo xubnaheeda balse waxay siisaa cod shirarka waaweyn ee dalxiiska. WTN waxay siisaa fursadaha iyo isku xidhka muhiimka ah xubnaheeda ku sugan 128 wadan. Macluumaad dheeraad ah: www.wtn.travel